အပိုင်းတစ်ပိုင်း - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘုရားသခင့်ဘုရားကျောင်းဆွစ်ဇာလန်
ဆောင်းပါး > နေ့-by-နေ့ > နည်းနည်းအားဖြင့် bit
«Danach schlachtete er das Brandopfer; und Aarons Söhne brachten das Blut zu ihm, und er sprengte es ringsum an den Altar. Und sie brachten das Brandopfer zu ihm, Stück um Stück, und den Kopf, und er ließ es in Rauch aufgehen auf dem Altar» (3. ကြွက် 9,12-13) ။
တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်အားပြောသောအခါကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားသည်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရှေ့တွင်လွှင့်ပစ်လိုက်သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဒါမဟုတ်ဘူး။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထိုသို့ပြုပါကကျွန်ုပ်တို့၏နောင်တသည်အလွန်မှုန်ဝါးနေပြီးအပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းမှသတိရှိရှိရှောင်ထွက်သွားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငါတို့ကအမဲသားတစ်ရွက်ကိုကင်ပေါ်မတင်ရုံသာမကဘဲအညီအမျှကြော်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ရှိသောနှလုံးသားများသည်လည်းထိုနည်းတူပင်။
သူတို့သည်မီးရှို့ရာယဇ်ကောင်သားတစ်များနှင့်ခေါင်းကို ဆက်၍၊ သူသည်ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာမီးရှို့လေ၏။ အာရုန်ရဲ့သားနှစ်ယောက်ကသူ့ကိုကမ်းလှမ်းချက်ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်အာရုံစိုက်ချင်တယ်။ တိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကိုမလွှတ်ဘဲယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာတင်ထားကြ၏။
အာရုန်၏သားနှစ်ယောက်တို့သည်၊ သတ်ထားသောတိရစ္ဆာန်ကိုယဇ်ပလ္လင်တစ်ခုလုံးပေါ်တွင်တင်ရုံသာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ယဇ်၊ နှလုံးသားနှင့်ထပ်တူပြုရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုညစ်ညူးစေသောအရာများကိုဘုရားသခင်အားပေးဆပ်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အတင်းအဖျင်းကို ပြော၍ စိတ်နှလုံးထဲ၌ကျွန်ုပ်၏တပ်မက်ခြင်းများကိုပေးသည်။ ဘုရားသခင်အားကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားကိုဤနည်းဖြင့်စတင်သောအခါသူသည်၎င်းကိုယဇ်အဖြစ်လက်ခံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ၌မကောင်းသောအရာများအားလုံးသည်ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်ရှိပြာများဖြစ်လာပြီးဝိညာဉ်တော်၏လေကိုမှုတ်ထုတ်လိမ့်မည်။
Fraser Murdoch ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်